Efesofo 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔde kɔmaa Efesofo 2:1-22
Wama yɛne Kristo anya nkwa (1-10)
Odwiriw ɔfasu a na etwa wɔn ntam no gui (11-22)
2 Afei nso, na moawu wɔ mo mfomso ne mo bɔne mu, nanso Onyankopɔn ama moaba nkwa mu.+ 2 Bere bi, na monantew sɛnea wiase yi te;*+ ɔpanyin a ɔde ne tumi akɛntɛn mframa a ɛrebɔ no so+ no, monantewee sɛnea ɔpɛ. Saa mframa no ne honhom+ a seesei ɛyɛ adwuma wɔ asoɔden mma mu no. 3 Yɛn nyinaa, bere bi, saa na yɛbɔɔ yɛn bra; yedii yɛn honam akɔnnɔ akyi,+ na yɛyɛɛ nea yɛn honam ne yɛn nsusuwii kyerɛɛ yɛn.+ Afei nso, na yɛyɛ abufuw mma+ fi awo mu te sɛ wɔn a wɔaka no ara. 4 Nanso Onyankopɔn a ne mmɔborɔhunu dɔɔso+ no, esiane ɔdɔ kɛse a wada no adi akyerɛ yɛn+ nti, 5 bere mpo a na yɛawu wɔ mfomso mu+ no, ɔmaa yɛne Kristo nyaa nkwa; wɔnam adom so na agye mo. 6 Bio nso, Onyankopɔn ama yɛanya nkwa, na wama yɛn baabi a yɛbɛtena wɔ ɔsoro, efisɛ wama yɛne Kristo Yesu nyinaa ayɛ baako.+ 7 Onyankopɔn yɛɛ saa sɛnea ɛbɛyɛ a wiase a ɛreba* no mu no, n’ayamye* nti, obeyi n’adom bebrebe* no adi akyerɛ yɛn a yɛne Kristo Yesu ayɛ baako no. 8 Adom yi nti wɔnam gyidi so agye mo nkwa.+ Ɛnyɛ mo ara mo mmɔdenbɔ ntia, na mmom ɛyɛ Onyankopɔn akyɛde. 9 Daabi, ennyina nnwuma a obi yɛ so,+ sɛnea ɛbɛyɛ a obiara rennya biribi nnyina so nhoahoa ne ho. 10 Yɛyɛ Onyankopɔn nsa ano adwuma, na ɔbɔɔ yɛn+ wɔ Kristo Yesu mu+ sɛ yɛnyɛ nnwuma pa, nnwuma a Onyankopɔn hyɛ too hɔ sɛ yɛnyɛ no.* 11 Enti monkae sɛ bere bi a atwam no, na moyɛ amanaman mufo fi awo mu,* na wɔn a nnipa atwa wɔn twetia* a wɔfrɛ wɔn “twetiafo” no frɛɛ mo “momonotofo.”* 12 Saa bere no, na munnim Kristo; ná moyɛ nkurɔfo a wɔne Israel man no ntam atetew; bɔhyɛ no ho apam+ ahorow no nso, na monka ho. Afei nso, na mowɔ wiase no mu a munni anidaso biara, na na munnim Onyankopɔn.+ 13 Nanso mo a bere bi na mowɔ akyirikyiri no, afei mo ne Kristo Yesu ayɛ baako, na monam Kristo mogya so abɛn Onyankopɔn. 14 Kristo na wama yɛn asomdwoe,+ na wayɛ akuw abien no baako+ adwiriw ɔfasu a na etwa wɔn ntam no agu.+ 15 Ɔde ne nipadua bɛsɛee nitan no, kyerɛ sɛ, Mmara nsɛm a ahyɛde ahorow wom no, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma akuw abien no nyinaa ne no abom ayɛ onipa foforo,+ na ɛde asomdwoe aba; 16 ɛno bɛma wafa asɛndua* no so asiesie akuw abien no ne Onyankopɔn ntam,+ na akuw no abom wɔ nipadua koro mu, efisɛ ɔde ne nipadua kum nitan no.+ 17 Na ɔbɛkaa asomdwoe ho asɛmpa kyerɛɛ mo a bere bi na mowɔ akyirikyiri ne wɔn a na wɔbɛn Onyankopɔn no, 18 efisɛ akuw abien no nyinaa, ɔno na yɛnam no so ba Agya no nkyɛn esiane honhom koro no nti. 19 Enti afei monyɛ ahɔho ne amamfrafo bio,+ na mmom mo ne akronkronfo a wɔaka nyinaa yɛ ɔman mma,+ na moyɛ Onyankopɔn fifo,+ 20 na moayɛ sɛ ɔdan a wɔasi wɔ fapem a ɛno ne asomafo ne adiyifo no so,+ na Kristo Yesu ankasa ne ntwea so bo titiriw no.+ 21 Yɛne no ayɛ baako, na ɔdan no ho biribiara akeka asi ani pɛpɛɛpɛ+ ma ɛreyɛ asɔrefi kronkron ama Yehowa.*+ 22 Waka mo ne Kristo abom ayɛ baako, na wɔresi mo nso abom ma ayɛ baabi a Onyankopɔn nam ne honhom so bɛtena.+
^ Anaa “wiase yi kwan so.”
^ Anaa “mmere a ɛreba.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Anaa “ne papayɛ.”
^ Anaa “n’adom ahonya.”
^ Anaa “yɛnnantew mu no.”
^ Nt., “wɔ ɔhonam mu.”